[28 / 02 / 2020] Bakan Pekcan: Bakü Tiflis Kars Demiryolu Tren Seferleri Arttırılabilir	06 Ankara
Maalinta: Ogast 10, 2017
Sultangazi'de oo marinaysa wadada isku dayaysa in ay ka gudubto waddada ayaa lagu garaacay taraam
Haweeney isku dayday inay ka gudubto wadada Sultangazi waxaa ku dhacay taraam. Muwaadiniintii goobta ku sugnaa ayaa la koryeelay si ay u caawiyaan haweeneyda nasiib darada ah ee lagu soo jiiday taraamka 5 mitir. Istanbul Sultangazi'de si looga gudbo wadada [More ...]
Dowlada Hoose ee Magaalada Kocaeli ayaa dhawan riixday badhanka loogu tala galay dhismaha qadka metrooga oo ka bilaaban doona bartamaha Darica una sii gudbi doona Aaga Wershadaha Gebze. 12 kiiloomitir dhererkeeda tareenka dhererkiisu yahay 1.5 sano kahor [More ...]
Isticmaalka Isticmaalka Ardayda
Isqorista jaamacadaha kuwa u qalma inay iska diiwaangeliyaan barnaamij waxbarasho sare oo leh natiijooyinka Nidaamka Xulashada Ardayda iyo Meelaynta Ardayda (ÖSYS). Habka diiwaangelinta ee musharixiinta xaq u leh inay iska diiwaangeliyaan barnaamij sida waafaqsan natiijooyinka OSYS, 2017-14 [More ...]
Ka faaiidaysta dadka curyaamiinta ah ee Boostada
Teendhooyinka Bandhiga N EGO ee Agaasinka Guud ee EGO, oo lagu aasaasay aagga Bandhigga Caalamiga ah ee Ankara, ayaa lagu buuxiyay maalmo 9. Aasaasidda 75. Teendhooyinka dhiirrigelinta ee Agaasinka Guud ee EGO oo u dabaaldegaya sannadka; adeegyada gaadiidka [More ...]
Samsun, ciqaabtu waxay u yimaadaan dadka isticmaala Samkart
Samsun Metropolitan Dawlada UK UK waxay qaadatay go'aan cusub oo la qaatay maalmihii ugu dambeeyay sabatoo ah kororka isticmaalka gaadiidka sharci darada ah ee loo yaqaan Samkart qaban qaabadiisa. Sababta oo ah kororka isticmaalka sharci darrada ah ee Samkart [More ...]
Wareerka Joogitaanka Metrobus waa Khatar
Gacanta cunugga wuxuu ku xayiran yahay albaabka wiishashka ee Jaamacadda Cihangir University Neighborhood Metrobus Stop. Dukaanleyda badbaadisay canugga ayaa sheegay in shilalka noocan oo kale ah ay badanaa ku dhacaan cunugga wiishash-ka oo ku yaal boosteejada Metrobus Stop ee Jaamacadda Cihangir. [More ...]
RayHaber 10.08.2017 Warbixinta Shirka
Adeegyada Nabadgalyada Gaarka ah ayaa la qaadi doonaa Nidaamka Muuqaal Sawirada TCDD 4 Regional Directorate Dhismaha Cusboonaysiinta Shaqada
Maareeyaha Guud ee TÜVASAŞ Madaxweynaha SATSO Kösemusul oo booqday Kocaarslan, ayaa hoosta ka xariiqay in Sakarya ay tahay magaalada wax soo saarka qaranka wuxuuna cadeeyay inay ku siin doonaan dhamaan taageerada sidii ganacsi caalami ah wax soo saarka Tareenka Qaranka. Professor [More ...]
"Baaskiilada Magaalada" İzmir
Aziz Kocaoglu, Duqa Magaalada Izmir Magaalo Weyn, wuxuu la kulmay wakiilo kooxaha baaskiillada qaadaya meesha ugu horeysa ee magaalada 52 ee tartanka Baaskiilada Yurub ee kuyaala Magaalada Inciralti Urban Forest. Baahiyo iyo talooyin kor loogu qaadayo isticmaalka baaskiilka [More ...]
Adeegyada basaska ee Sabiha Gökçen ee Burulaş
Shirkadda Gaadiidka Dawladda Hoose ee Magaalada Bursa (BURULAŞ) waxay bilowdaa adeegga basaska inta udhaxeeya Bursa Intercity Bus Terminal iyo Sabiha Gökçen Airport maalinta 10 Agoosto (TODAY). Dhacdooyinkaas ka dib garoonka diyaaradaha ee Istanbul Sabiha Gokcen [More ...]
'Yıldırım metro' wuxuu ka bilowday magaalada Bursa
Duqa magaalada Recep Altepe, oo ku qalabeeyay Bursa khadadka tareenka isla markaana ku nuuxnuuxsaday xalka kale ee gaadiidka, ayaa baaray howlihii laga bilaabay khadka tareenka ee Yıldırım. Qodista ceelka waxay qatar gelin doontaa Degmada Yıldırım [More ...]
Maanta taariikhda: 10 August August 1927 Tareennada Yenice-Nusaybin ...
Maanta taariikhda 10 August 1927 Shirkadda tareenada ee Yenice-Nusaybin ayaa bilaabay shaqo joojin shaqaalaha Turkiga ah.